जानी राखौं : अमेरिकी सरकारले दिने भनेको आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज कसले पाउँछ ? - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल ८ चैत्र २०७६, शनिबार ०२:४६
कोरोना भाइरसको कारण सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको अवस्थामा कैयन मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका मात्र होइनन् । आर्थिक गतिविधिपनि निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको अवस्था छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट अमेरिकीहरुलाई अलिकति भएपनि राहत होस भन्ने उद्धेश्यले अमेरिकी रिपव्लिकन सिनेटले आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज पारित गरेको छ । सो प्याकेजले अब दुवै हाउसबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सही गरेपछि लागु हुनेछ । जुन हुने निश्चितप्राय छ । सिनेट तथा हाउस अफ रिप्रिजिन्टेटिभलेपनि सो प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
कस्ता व्यक्तिले पाउँछन त आर्थिक प्रोत्साहन रकम ?
झण्डै एक ट्रिलियन अमेरिकी सरकारले हरेक अमेरिकी नागरिकलाई वितरण गर्नेछ त्यो पनि चेक मार्फत जुन रकम अमेरिकामा बस्ने हरेकले पाउनेछन जो संग सोसल सेक्युरिटी नम्बर छ । तर वितरणको मापदण्ड भने तोकिएको छ । आम्दानी मध्यम तथा कम हुनेलाई लक्षित गरी सो रकम वितरण गर्न लागिएको हो । कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न तनावलाई कम गर्न र आर्थिक प्याकेजबाट मानिसहरुमा गुमेको आत्मविस्वास फर्काउन सो प्याकेज तयार पारिएको हो । रकम सोझै चेक मार्फत आउनेछ । तर सो रकम एक लाख अमेरिकी डलर भन्दा धेरै कमाउनेहरुका लागि होइन । सो चेक प्राप्त गर्न आम्दानी बार्षिक एक लाख डलर भन्दा कम हुनुपर्छ । श्रीमान श्रीमतीको संयुक्त रुपमै छन भने दुवैको आम्दानी एक लाख ९८ हजारमात्र आम्दानी बर्षको हुनुपर्नेछ । यसमा बच्चाहरुको रकम भने जोडिनेछैन ।
सिनेटले प्रस्ताव गरेको आर्थिक प्याकेज रिपव्लीकनहरुले ह्वाइट हाउसंग परामर्श गरेर तयार पारेको बताइएको छ । जसमा ७५ हजार भन्दा कम बार्षिक आम्दानी भएको एकजना व्यक्तिले १२ सय डलरको चेक पाउनेछ । यदि श्रीमान श्रीमती संयुक्त रुपमा छन भने उनीहरुले पाउनेछन २४ सय डलर तर उनीहरु दुवैको आम्दानी एक लाख ५० हजार भन्दा कम हुनुपर्नेछ । तर यदि बार्षिक आम्दानी ७५ हजार भन्दा धेरै भयो भने प्रोत्साहन रकम कम हुनेछ । औषतमा निकालिए अनुसार ८० हजार आम्दानी हुनेले पाउनेछ ९ सय ५० मात्र ८५ हजार हुनेले ७०० र ९० हजार आम्दानी हुनेले चार सय ५० मात्र पाउनेछ । तर बच्चाहरुको सवालमा भने रकम आमाबाबुको आम्दानीले फरक पर्दैन । एक बच्चालाई ५ सय डलर दिइनेछ । विवाहित महिला पुरुष जसको संयुक्त टैक्स रिटर्न आउंनेछ २४ सय डलर । जसमा बच्चाहरुलाई प्र्रत्येक बच्चाहरुलाई ५ सयको दरले आउनेछ ।
सो प्रोत्साहन प्याकेज कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको लागि थप हुने छ ।
८ चैत्र २०७६, शनिबार ०२:४६ मा प्रकाशित